Ndezvipi zvinotungamira mukushambadzira uye kuti ungazvigadzira sei ECommerce nhau
Kana iwe uchifarira kwazvo kushambadzira kwedhijitari, uye uchifunga kuti izvo zvave kuwedzera zvechiitiko uye vanhu vazhinji vari kutenderedza mabhizinesi avo munzira iyoyo, iwe unofanirwa kuziva izvo zvinotungamira uye nei zvichikosha izvozvi.
Uye ndizvo izvozvo zvirevo zvakaita se "gadzira zvinotungamira" kana "chinja zvinotungamira kuva vatengi" vanonzwikwa zvakanyanya (uye kuverenga) asi chii chinonzi lead chaizvo? Ndezvipi izvi? Ungashanda sei navo? Tinoda kutaura newe nezve zvese izvo uye zvimwe zvakawanda pazasi.
1 Chii chinonzi lead
2 Nei zvakakosha zvichikosha?
3 Mhando dzekutungamira
3.1 Kutonhora kunotungamira
3.2 Dzinotungamira zvinotungamira
3.3 Warm inotungamira
4 Maitiro ekugadzira anotungamira
4.1 Kushambadzira uye kusimudzira zano
4.2 Zvinonakidza zvemukati
4.3 Sevhisi yakasarudzika
Chii chinonzi lead
Iri izwi risinganzwisisike rinogona kupidigura vanhu vazhinji, rine nyore kwazvo kunzwisisa zvinoreva. Uye ndezvekuti, kana isu tikaongorora zvarinoreva, isu tinoziva kuti mutungamiriri munhu chaiye. Anoshandisa. Asi kwete chero imwe chete.
Fungidzira kuti iwe unopinda peji rewebhu nekuti urikutsvaga chigadzirwa. Ndokunge, iwe hausati waziva kana uchizozvitenga kana kwete, kana iwe uchifarira kana kwete. Zvakanaka, zvese izvo zvinoita kuti iwe utungamire, kana izvo zvakafanana, mutengi anogona. Uye ndezvekuti, icho chokwadi chekupinda muchitoro chepamhepo chinotokuita iwe muchikamu chekutanga cheiyo yekutenga kutenderera.
Nokudaro, Mutungamiriri anogona kutsanangurwa seuyo mushandisi anoonekwa seanogona kuve mutengi kana munhu anogona kupedzisa kuita kwese kwekutenga kwechimwe chigadzirwa (kana sevhisi).
Maitiro aya ane chekuita nematanho ekutengesa ayo atakakuudza nezvazvo pane chimwe chiitiko, uye ndivo vanhu vatinokwezva, kungave kuburikidza neshambadziro, kutaura kwemuromo kana zvimwe zviteshi zvekushambadzira kuitira kuti vasvike kuchitoro paInternet.
Nekudaro, zvirevo zvatakakuudza zvisati zvanzwikwa (uye kuverenga) zvakawanda zvine chekuita nevangangove vatengi, kana vatengi chete, kwete chete kuzvitoro zvepamhepo, asiwo kune chero webhusaiti yeInternet. Semuenzaniso, zvichatsvaga nepepanhau kuve nevaravi vazhinji; blog yakafanana, peji yemitambo, kuti kune vazhinji vatambi vari kutamba ...
Nei zvakakosha zvichikosha?
Kunyangwe izvi zviri kupfuura kupindurwa mune zvese zvatakambokurukura, chokwadi ndechekuti, nhasi, zviri kuwedzera kukosha kuwana kutungamira. Ramba uchifunga kuti isu tiri kuwedzera kuzadzwa neruzivo, mashopu ... Kureruka kwekugadzira mapeji ewebhu, pamwe nekukwira kwemagetsi commerce kwakaita kuti vakawanda uye vazhinji vevanamuzvinabhizinesi vatendeukire kumaInternet network kubheja pamabhizinesi avo. Uye zvinoreva izvozvo iwe unofanirwa kusvika kune vangangoshandisa, kana lead.
Sekureva kwenyanzvi, Internet iri kuzochinja tsika dzekutenga, uye iri kutoita saizvozvo. Vazhinji uye vanhu vazhinji vanotenga pamhepo nekuti ivo vanofarira kuchengetedza mari uye voenda nayo kumba (kunyangwe ichidhura, chokwadi chekuitambira kumba ndeyekuwedzera). Nekudaro, izvo zvinotungamira, kana vangangove vatengi, ndizvo zvichave zvinogadzirisa kubudirira kana kutadza kwewebhu peji Nekuti, kana iwe usina vateereri, uchaenderera mberi sei nekupa chimwe chinhu chisingafadze chero munhu?
Vamwe Nyanzvi dzezvekutengesa dzinoona kuti kune matatu marudzi ezvekutungamira zvekufunga. Izvi zvinogona kupfuudzwa kubva kune imwe nhanho kuenda kune imwe, asi vangangoita vese avo vanosvika pawebhu peji vanogona kuverengerwa mavari. Vari:
Ivo ndeavo vashandisi vanosvika asi vasina chinokurudzira kutenga. Mune mamwe mazwiIvo vari kungoda kuziva kuti ndiani achaona izvo zvavanoona. Zvakafanana kana iwe ukaenda kuchitoro kuti "utarise." Kana iwe ukapedzisira watenga chimwe chinhu, imhaka yekuti iwe unobva pakuva inotonhora inotungamira kune inodziya uye kubva ipapo kuenda kune inodziya. Asi kana iwe ukasiya usina chinhu, kana chete ruzivo, ipapo unenge uchiri kutonhora.
Ivo vashandisi vari kutsvedza kutonhora uye kudziya. Uye ndizvozvo vanoziva zvavanoda kana zvavanoda, asi havasati vatora danho rekupedzisira kutenga uye ivo vachiri kuongorora kana zviri izvo chaizvo zvavanoda kana kana chimwe chinhu chiri nani.
Ava ndivo avo vashandisi vanoda kutenga, ndiani Vakaita ongororo yavo uye vanoziva zvavanoda kutenga, nekudaro vachazviita kana, kana vasingakwanise kuzviita ivo vega, Ivo vachatsvaga iwe kuti uvabatsire kupedzisa iyo yekutenga maitiro.
Maitiro ekugadzira anotungamira
Unogona here kugadzira zvinotungamira? Zvinoita here kuti ugadzire ivo? Hongu uye kwete…
Kuti ugadzire zvinotungamira zvakakosha, kutanga pane zvese, ziva wauri kutaura naye. Mune mamwe mazwi, tiri kutaura nezvekuziva kuti chigadzirwa kana sevhisi yaunopa ndeyani. Nekuti, nenzira iyoyo, iwe unogona kumisikidza nzira yekutengesa yaunosvika nayo kuvanhu uye, hongu, gadzira zvinotungamira.
Izvi zvinomuka nekuti vanhu vane dambudziko, kana vanoda chimwe chinhu, uye kuburikidza nezano rako (kunyanya kushambadzira) vanouya kune peji rako vachitsvaga mhinduro kune izvo "zvinovatorera kurara kwavo." Kana iwe ukaipa, uye ukavagutsa, iwo anotungamira (nekuti vava iyo nguva yavanogara pawebhusaiti yako) vanozove vatengi chaivo. Uye zvakare, ivo vanokupa iwe yakakosha ruzivo, senge zita ravo, zera, mukadzi uye email, pakati pevamwe, kuti iwe ugone kuzosvika kwavari gare gare.
Uye unozviwana sei izvozvo? Tinokupa makiyi:
Kushambadzira uye kusimudzira zano
Kuti usvike zvinotungamira zvinofanirwa kuti vatange vawana chako chitoro chepamhepo, eCommerce, webhusaiti ... Uye kune izvi iwe unogona kusarudza kumisikidza nzira dzekusimudzira dzepamhepo online, semuenzaniso izwi remuromo, zviitiko, kushambadzira kweSEM, SEO ...
Zvese izvi zvinoita kuti iwe usvike vanokwanisa vashandisi avo, kana vakapinda peji rako, vanotanga maitiro ekushandura kuita anotungamira Ehezve, havazi vese vanopinda vanozoshandura kubva kune vangangove vatengi kuva vatengi, saka chengeta izvo mupfungwa.
Uye unovaita sei kuti vatendeuke? Kuwe murudo nezvaunopa. Zvese dhizaini uye zvinyorwa zvinofanirwa kutariswa kuti zviitwe, kana zvichibvira zvakanaka, mavari. Nekudaro, iwe unofanirwa kutarisira zvakanaka zvaunovapa kuitira kuti varambe vachiita shanduko.
Izvi zviri kuwedzera kukosha. Uye ndizvo izvo chokwadi chekuti mabhizinesi eInternet ari kuwedzera anokonzera kukwikwidza kukuru. Asi kana uchigona kuvapa chimwe chinhu icho vamwe chavasina kuvapa, ivo vachakusarudza iwe kune vamwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Ndezvipi zvinotungamira mukushambadzira uye kuti ungazvigadzira sei